Shiinuhu isku dhejin karo oo ka shaqeeya agagaarka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha tuubada hadhida-biyoodka ee cadaadiska sarreeya | Linhui Hardware
Haddii aad ka shaqeysay hareeraha nidaamyada hawo-mareenada wakhti kasta, waxaad aragtay tuubbada hawo-mareenada oo fashilantay. Haddii guuldarradu ay keento tuubbada oo ay qabato qayb dhaqaaqaysa ama tuubadu ay ka soo baxdo qalab ku habboon, cawaaqibta waxay noqon kartaa wax ka badan oo kaliya qas weyn iyo luminta saliidda biyaha. Mid ka mid ah cawaaqibka noocaas ah waa karbaash tuubo.
Nidaamka Kahortagga Tuubada Tuubada ayaa la rakibay. Marka isku dhafka tuubada uu gabi ahaanba ku guuldareysto meel u dhow meesha lagu rakibo, cadaadiska tuubada ayaa keena inuu ku garaaco agagaarka. Waxay ku dhufan kartaa oo dhaawici kartaa qaybaha kale ee nidaamyada hawo-mareenada waxayna dhaawici kartaa shaqaalaha.
Mid ka mid ah xal si looga ilaaliyo tuubada ugu danbeyn karbaash waa in la isticmaalo nidaamka xakamaynta tuubada. Nidaamyada xajinta tuubada waxaa loogu talagalay inay ka hortagaan garaaca tuubada cadaadiska leh haddii ay dhacdo tuubada ka soocaysa ku-habboonaanta. Waxay bixiyaan heerka badbaadada dheeraadka ah waxayna ka caawiyaan ka hortagga waxyeelada qalabka u dhow ama dhaawaca hawl-wadeennada u dhow tuubada guuldarraysatay iyaga oo xaddidaya fogaanta safarka tuubada cadaadiska ka dib marka ay ka xorowdo qalabka ku habboon.
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, tuubada tuubada iyo isku xirka fiilada. Qalabka tuubada waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo dhexroorka dibadda ee tuubada, iyo isku xirka fiilada waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo nooca isku xirka tuubada.
Mid ka mid ah nidaamyada ka hortagga tuubada tuubada ayaa la soo saaray, nidaamka ka hortagga tuubada laba nooc oo fiilooyinka fiilada ah - mid ka mid ah isku xirka nooca flange, iyo kan kale ee loogu talagalay adabtarada dekedaha.
keena Alaabta Badbaadada Tuubbada sida sharabaadada jeedal, jeedal joogsiyada, Cable Chokers, Nylon chokers iyo Hose Hobbles sidoo kale loo yaqaan Pipe Clamps.
XULASHADA TUBEELKA / XULASHADA
Tuubooyinkayaga lagu sameeyo CHINA tuubooyinka waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan oo lagu dooranayo inay ku habboon yihiin noocyo badan oo tuubo ah. Waa muhiim in la ogaado tuubada OD ee aad la shaqaynayso si aad ugu habboonaato tuubada. Xakamaynta waxaa lagu heli karaa tuubada tuubada, ama tuubada indhaha ama wax kasta oo kale oo la dooran karo iyo qaabaynta.
BADBAADADA-HOBBLE: Hose Hobble
Tuubooyinka tuubooyinka waxaa loo isticmaalaa in lagu xidho tuubada xakamaynta gacmo-gacmeedyada badbaadada. Waxaa loo isticmaali karaa tuubada ama tuubooyinka derbiga adag waxayna yareeyaan suurtogalnimada tuubada tuubada haddii ay dhacdo isku-xirnaansho la'aan. Hubi in barroosinnada lagu qiimeeyay culeyska iyo xoogga codsiga, raac tilmaamaha rakibidda. Waa in uu ku rakibaa gacanta badbaadada tuubada ka hor inta aan la isku xidhin galinta/ururka.
Hore: Tuubadu waxay xakamaysaa Qabashada Basket Type R
Xiga: Nidaamka xakamaynta karbaashka tuubada oo leh labajibbaaran
fiilada jiidista xajinta siliga
xidhid dhamaad dhintay
xirmooyinka tuubooyinka cadaadiska sare
Xajinta fiilada Voltage High
silig bir ah iyo xajin